Talooyin SEO ah oo loogu talagalay Suuq-geynta Shirkadda Sharciga
Waqtiyadaas, qareenada ayaa wajahayaan caqabado badan oo la xiriira suuq geynta internetkakuwaas oo ah kordhinta tartanka iyo isbedelka dabeecadaha macaamiisha. Natiijo ahaan, Search Engine Optimization waxay mudnaanta u leedahay shirkado badan.
SEO waa ficil ah oo ku lug leh kontaroolida labada qaybood ee goobta iyo kuwa ka baxsan goobtaee bogga kaas oo loo tixgeliyo mashiinno raadin ee liiska. Farsamooyin badan oo SEO ah ayaa lagu dabaqi karaa dhammaan warshadaha kala duwan, laakiin si guul lehiyada oo lagu dhiirigelinayo shirkaddaada warshad sharci ah waa in la tilmaamaa. Suuq geynta suuqa waa mid ka duwan, sida ugu dhakhsaha badanxeerarka iyo qawaaniinta waxaa lagu soo rogaa ururada barashada gobolka
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegga Digital waxay muujineysaa sifooyinka ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad fidinayso istaraatiijiyada SEO ee shirkad sharci.
1. Cilmi-baarista Kelmadaha
Tallaabada ugu horreysa ee lagu wanaajinayo websiteka waa baaritaan cilmi-baaris oo muhiim ah. Qareenwaxay xoogga saari karaan ereyada muhiimka ah ee tilmaamaya in raadiyaha uu doonayo inuu saxiixo adeega sharciga. Ereyada muhiimka ah waa inay lahaadaan mugga habboonsi loo hubiyo in mashiinka raadinta uu toos ugu wadi doono gaadiidka. Furaha farsamadani waxa weeye waxa la ogaado waxa macmiilka suurtogalka ahwaxay ku qori karaan galka raadinta
2. Wicitaanka Khadka Gaarka ah ee Gaarka ah
Farsamo kale oo caddaynaya waxtarkeeda waa wicitaan gaar ahsi ficil. Tani waxaa loogu talagalay in lagu qasbo booqdaha in ay talaabo qaadaan. Hovewer, abuuritaanka wicitaan ficil wuxuu u baahan yahay dadaal iyo istaraatiijiyadtaas oo soo jiidi doonta. CTAs waa inay hubiyaan in raadiyaha uu si sahlan u arki doono farriinta iyada oo aan la marin macluumaad badan..Waxaywaa inay wacaan wicitaankan si ay uga shaqeeyaan bog kasta oo ka mid ah bogagga shabakadda meelaha ugu muuqda, tusaale ahaan, madaxa bogga.
3. Xeer Ilaaliyaha
Tani waxay guud ahaan loola jeedaa koodhka HTML kaas oo inta badan lagu dabaqo contentsi uu u caawiyo mashiinka raadinta si uu u fahmo xidhiidhka ka dhexeeya noocyo kala duwan oo ka mid ah maadooyinka. Wershadaha sharciga ayaa leh nidaam u gaar ahoo u ogolaanaya raadiyaha raadinta inuu ogaado nooca waxyaalaha la xidhiidha qof kasta oo takhasus leh ama shirkad sharci. Ku calaamadee mawduucaaga shemawaxay gacan ka geystaan ​​sidii loo hagaajin lahaa qiimaha riixitaanka ee natiijooyinka raadinta raadinta.
4. Mawduuc Sharciyeed Sharciyeed
Google wuxuu ku xajiyaa oo wuxuu tusayaa waxyaabaha ku jira internetka ee nidaamsan oo isku xidhanhab. Sidaa darteed, way wanaagsan tahay in aad abaabusho websaydhkaaga si aad u heshid bog oo loogu talagalay aag kasta oo ku takhasusay xirfadahan oo dhan si taxadar leh u akhri.Taasi waxay ka saari doontaa culeyska helitaanka wax ku oolka ah bogga internetka.
5. Xiriirinta Link
Link Building waa arrin kale oo si weyn u saameeya darajada bogganatiijooyinka mashiinka raadinta. Si kastaba ha noqotee, dhammaan iskuxirka lama siman yahay. Sidaa darteed, qareenka wuxuu u baahan yahay inuu helo xiriiryo ka yimid ilo tayo sare lehmacquul ah. Tirada badan ee xiriirinta tayo sare leh waxay tilmaameysaa boggagaaga, si ka fiican waxay ufududayn doontaa matoorada raadinta.
Maalintan iyo da'da, sameynta bog internetka ah ma aha mid loo doorto qareennada.Maalin kasta, macaamiil badan oo badan ayaa u jeestay goobaha internetka si ay u helaan macluumaad ku saabsan adeegyada sharciga. Sare macaamiishu waxay caddeeyeen, inQorshaha SEO oo dhan waa muhiim haddii aad rabto inaad soo bandhigto bogga ugu horeeya ee natiijooyinka raadinta raadinta Source .